MIBVUNZO - YANXA (HK) YEMAHARA INDUSTRIAL CO., LTD
Kune sampuli, iyo inotungamira nguva ingangoita mazuva manomwe. For vakawanda kugadzirwa, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Nguva dzinotungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana yedu yakatarwa yekutungamira nguva isingashande neyakafa yako, ndapota taura nemaneja wedu wekutengesa kuti utarise mhinduro inoshanda. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.
unogona kuita mubhadharo kubhengi account yedu, munzira ye30% dhipoziti pamberi, 70% mwero uchipesana nekopi yeB / L naT / T kana L / C paunoona.
Isu garandi zvinhu zvedu uye nekushanda. Kuzvipira kwedu ndekwekuti iwe ugutsikane nezvigadzirwa zvedu. Pasi pevimbiso kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa zvese zvinonetsa vatengi uye kusangana nekugutsikana kwako.
Mari yekutumira inoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Express inowanzo kuve inokurumidza asi zvakare inodhura nzira. Kufambisa kwegungwa ndiyo mhinduro yakanakisa yehukuru hukuru hwehodhi. Mitero yekutakura chaiyo inogona kupihwa kune chako chirevo chete kana isu tichiziva ruzivo rwehuwandu hwehuwandu, huremu, nzira dzekufambisa nezvimwewo ndokumbira utibate kuti uwane rumwe ruzivo